Atoa Gérard Andriamanohisoa. Niezaka ny fitondrana hatramin’izay namaha ny olana. Nanao isika ny 2006 ny Boulevard de Tokyo, ny Fitondrana Ravalomanana no nanao izany. Nanao isika ny Rocade Ivato Ambohitrimanjaka tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina, nanao isika ny Rocade d’Iarivo izay ity fitondrana ity no namarana izany. Fitadiavam-bahaolana daholo izany? Tsy nisy nametra-panontaniana hoe: nandaniana 145 tapitrisa euros ka firy ny olona tateriny? Mifandraika amin’izany ve ny fanonerana sy ny fiara mandalo eo? Tsy azo ampandeferina ny famahana ny olana eto Antananarivo. Izao mipoitra ity tetikasa maoderina ity, matotra, tsy misy fandrodanana trano, tsy mila flyover 10,… hoy izy. Nambara ihany koa fa tsy afa-misaraka ny “Train urbain” sy teleferika, ary efa mandeha ny dingana ho an’ny train urbain amin’izao. Mikasika ny adihevitra amin’ny fiangonana katolika, dia nilaza i Gérard Andriamanohisoa, fa nisy ny alatsinainy teo ny fihaonana tamin’ny Mopera Jesoita ao amin’ny Saint Michel sy Analamahitsy izay hisy “pylones” telo ihany koa. Tsy misakana ny tetikasa ny avy amin’ny rafitry ny fiangonana, fa mizara miharihary sao misy vahaolana teknika momba ny fametrahana ny “pylones”. Ny teo amin’ny Saint-Michel dia vahaolana ny famoahana ny “pylones” eo ivelany, araka ny fanazavana. Ny Gara 12 dia tanim-panjakana avokoa. Nambara fa azo antoka ny orinasa Poma hanatanteraka ny asa, ary misy fiantohana na « assurance » ny teleferika. Momba ny hoe hitatitra olona 40000 isan’andro dia nambara fa kaonty ambany aza izany satria 700 000 ny olona mifamezivezy eto Antananarivo isan’andro. 1,5 tapitrisa ny mponina eto Antananarivo Renivohitra, ary 1,750 tapitrisa ny manodidina. Manodidina ny 2 tapitrisa ny mivoaka sy miditra isan’andro. Cabines 280 ny totaliny no hampiasaina, ary hiasa ao antin’ny ora maro. Telo volana taorian’ny fifanaovan-tsonia no manomboka ny tena asa fanamboarana farahatarany, ka efa lasa lavitra kokoa ny dingana fanamboarana ny “Ligne Orange”, hoy Atoa Gérard Andriamanohisoa.
Légende : Ny Minisitra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny tetikasan’ny Filoha niaraka tamin’ireo solontenan’ny Poma sy ny Colas hanatanteraka ny teleferika